Talooyin Caafimaad Oo Looga Hortagi Karo Korono Fayraska (Coronavirus) | Dhexnimo Media
Home Maqaalo Talooyin Caafimaad Oo Looga Hortagi Karo Korono Fayraska (Coronavirus)
Talooyin Caafimaad Oo Looga Hortagi Karo Korono Fayraska (Coronavirus)
1) In qofka jooga ama tegeya meel Fayraskani baadi u yahay uu xidho maskaaro (Mask) ah nooca awoodda u leh in ay fayraskan qabato. Meelaha khatartani ka jirto waxaa ka mid ah Garoomada diyaaradaha, furdadaha iyo dhammaan marinnada dalka laga soo galo, cisbitaallada iyo guud ahaan meelaha lagu arkay xaalado xanuunkan ka mid ah.
2) Marada Maskaarada (Mask) haddii aad xidhantahay, ha u qaadan in aad ka badbaaday in xanuunku ku so ogaadho, waayo waxaa weli jira fursado ay ka mid tahay cillad marada shaandhadeeda ku jirta ama sida aad u xidhantay oo aan sax ahayn.
3) Isticmaal Afxidhka (Maskaarada) saxda ah oo ah ta leh sumadda N95 ama ka sii sarraysa, ee loogu talagalay in ay neefta ka reebto bakteeriyada iyo jeermiska.
4) Marka aad maskaarada iska furayso gacantaada ka ilaali in ay taabato halka ku beegan afka iyo sanka, waayo ma ogid in uu dul saaran yahay fayraska Koroono oo ka hadhay neefsiga. Halka ugu habboon ee aad qaban kartaa waa xadhkaha maskaarada ee dhegaha soo sudhan ama ku xidhan.
5) Inta aad af-xidhka (Maskaarada) xidhantahay, iska jir in aad ku dhaqdhaqaajiso jidhkaaga oo ay gaadho qaybaha kale ee wejiga. Waxa ay keeni kartaa khatar ah in Fayraska Koroono uu gaadho indhaha, ama indhaha.
6) Ku dadaal faraxalka, gacantaada oo aanad hubin in ay dhaqantahay, ha ku taaban sanka afka ama indhaha.
7) Ha fogow qof kasta oo leh calaamadaha hargabka, ama aad dareento in neefsigiisu aanu dabiici ahayn.
8) Haddii aad adigu xanuunsanayso adigu, ku ekoow gurigaaga.
9) Marka aad qufacayso ama hindhisayso, sanka iyo afka saar tuwaal ama harqad maro qah oo ku dabool sanka iyo afka, kaddib ku tuur qashin qubka.
10) Iska jir in aad taabato meelaha aad ogtahay in ay gacmo kala duwani taabtaan, sida handaraabyada iyo gacan-qabadyada albaabada goobaha dadweynaha, batamda laydhka laga shido, kaagga biyaha laga furo, taleefannada dadweynahuhu wada isticmaalaan, Iwm.
11) Marka aad faraha dhaqayso isticmaal sabbuun, waxa aanad ogaataa in muddada aad faraxalka wadaysaa aanay ka yaraan 20 ilbidhiqsi. Waxaa fiican in aad raadsato alkool ama dareereyaasha kale ee faraha la mariyo si ay bakteeriyada iyo jeermiska u disho.
Previous articleQodob kamid ah Heshiis hoose ay wada gaadheen Isra’il iyo Sudan oo Hirgalay
Next articleMarka Aad 30 Jir Gaadho Cuntoonyinkan Iska Ilaali